Sports Bra, Hoodies ho an'ny lehilahy, Yoga pataloha, Leggings ho an'ny vehivavy - Pluscool
hoodie sy ny palitao
ny yoga pataloha
Hividy ny mandeha maimaim-poana ny anankiray ho santionany
Yichun Pluscool Sports dia vatsian'ny vondrona ekipa matihanina tamin'ny 2016. Tena faly noho ny hevitra ny manao zavatra samy hafa, azo ampiharina sy ny stylish, dia niainga mba hamorona Pluscool Sports, ny tanjona amin'izany dia ny hiresahana fa ilaina ny sportswear avo lenta amin'ny vidiny tsara.
Pluscool Sports specializes amin'ny sportswear samy hafa, anisan'izany ny fanatanjahan-tena bra, leggings, ny yoga anaovan'ireo, fanaovana fanatanjahan-tena anaovan'ireo, famatrarana anaovan'ireo, maimaika mpiambina, sns nanolo-tena "Hifarana-user voalohany" filozofia, izahay no nanangona mahay modely mpamorona, za-draharaha mpitantana ary QC mpiasa , sy ny mpiasa amin'ny mihoatra ny 10 taona ny fanjairana traikefa.
Pluscool Sports tanteraka ny fanaraha-maso ny famokarana. Tsy mankasitraka sy mahatakatra ny fampiasam-bola ny mpanjifa manao, ary ny hany fomba aina Aoka Isika ho Mendrika laza dia ho tompon'andraikitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny dingana.
Rehefa manao ny zavatra iray, dia fantatsika fa hitranga.
Yigong Road No.819, Toekarena sy ny Fampandrosoana Zone, Yichun City, Jiangxi Faritanin 'Shina